Google Hack မယ်.. — MYSTERY ZILLION
Google Hack မယ်..
June 2007 edited November 2008 in Other
သိပ်စိတ်၀င်းစားသွားလား.. အရဲစွန့်ပြီး တင်ကြည့်တာ.. သိပြီးတဲ့လူတွေလည်း ရှိကြမှာပါ.. ကွန်ပျူတာထဲမှာ အဲဒါစုထားတာလေး ပြန်တွေ့လို့ဒီနေ့
ဘာမှတော့ ဟုတ်ပါဘူး.. Funny လေးတွေပါ..
သီချင်းရှာမယ်ဆိုရင် အဲ အဲ.. ဘယ်သူ့ဘလော့ပါလိမ့် တင်ထားတာကို ဖတ်ဖူးပါတယ်.. ကူးချတာမဟုတ်ပါဘူး.. ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်တိုင်ရှာထားတဲ့ဟာလေးပါနော်.. :5:
ွGoogle ထဲမှာ ရှာပြီး ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေကို Download လုပ်လို့ရပါတယ်..
ဥပမာ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့သီချင်းတွေဆို: ?intitle:index.of? mp3 jackson
?intitle:index.of? mp3 backstreetboys
?intitle:index.of? mp3 britneyspears
-inurl:php intitle:.index of. (mpg|mov|avi|wmv) "Movie Name"
ှု( ကွင်းစ ) ကွင်းပိတ်ထည့်စရာမလိုပါ.. ရှာချင်သည့် Movie အမျိုးစား သာရေးရန်ဖြစ်သည်..။
intitle:"index of" mpg "Movie Name"
mpg နေရာမှာ ဒါတွေ (mov|avi|wmv) ပြောင်းထည့်လို့လဲရပါသေးတယ်.. Movie အမျိုးအစားတွေပါ.. :5:
ဒါဆိုရင် Config.php ဆိုတဲ့ site တွေပေါ်ပါမယ်.. ဖိုရမ်အများစုက PHP message base နဲ့ run ပါတယ်.. ဆိုလိုတာက ဖိုရမ်ရဲ့ key တွေ ပါတတ်ပါတယ်.. admin တောင်လုပ်လို့ပါတယ်.. (ဟုတ်မဟုတ်တော့သိဘူး.. ဘာသာပြန်လိုက်တာ..)
This search brings up sites with "config.php" files. To skip the technical discussion, this configuration file contains bothausername andapassword for an SQL database. Most sites with forums runaPHP message base. This file gives you the keys to that forum, including FULL ADMIN access to the database
ဒါမျိုးဆိုရင် FrontPage ရဲ့ Password ရတတ်တယ် လို့ဆိုပါတယ်..
"hack gmail" filetype:pdf
pdf တင်မကပါဘူး powerpoint ဆိုရင် ppt, excel ဆိုရင် xls, Word ဆိုရင် doc etc., ပေါ့ဗျာ
www.portablefreeware.com အောက်မှာ Google Hack ဆိုတဲ့ 2MB လောက်ရှိတဲ့ software လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ code တွေမှတ်ရမှာ ခေါင်းရှုပ်တယ်ထင်သူတွေ အတွက် အသုံး၀င်လောက်ပါတယ်။
Hack မယ်လို့ပြောပြီးတော့ ......... software ကောင်းကောင်းပါ
ပည့်စုံအောင်တာလေး Download လိုက်
အသုံးတဲ့ ရင် ကျေးဇူးဘဲ လို့ပြောဖို့ မမေ့နဲ့နော်
google hack စာအုပ်လဲရှိသေးတယ် လိုချင်ရင်တော့...... :101::101::101::101:
စာအုပ်လေးရောလို ချင်သေးပါတယ်ဗျာ :o:o ဟိုက်စောင့်နေ မယ်ဗျာ မြန်မြန်တင်ပေးပါတော့ ဗျို့့:100::100::100:
Dangerous google search in sec စာအုပ်နာမည်လေးကတော့လှတယ်